Ny Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany indiana dia mifidy filoham-pirenena vaovao handray anjara
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Ny Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany indiana dia mifidy filoham-pirenena vaovao handray anjara
Ilay Rajiv Mehra voafidy vao voafidy dia mpikambana ao amin'ny IATO efa ela no nitana andraikitra lehibe ary nanara-maso ny fisoratana anarana amin'ny fivoriambe nandritra ny taona maro
Nahasarika mpifidy marobe ny fandatsaham-bato raha ny fahitana azy ho vaky, satria ny sasany tamin'ireo nandresy androany dia an'ny vondrona hafa very ary nitady fanovana.
Ny olana iray niteraka resabe dia ny fanesorana ny saran'ny mpikambana satria tamin'ny fotoanan'ny COVID.
IATO dia vondrona nasionalin'ny indostrian'ny fizahantany ary manana mpikambana mihoatra ny 1,600 manarona ny faritra rehetra amin'ny indostrian'ny fizahantany.
Tamin'ny fifidianana niadiana akaiky androany 6 martsa 2021 dia voafidy ho filohan'ny IATO i Rajiv Mehra, ary nandresy an'i Lally Mathews tamin'ny sisiny tery. EM Najeeb dia nitana ny toerany amin'ny maha filoha lefitra zokiolona azy. Harish Mathur, an'ny Concord, dia nandresy tamin'ny isa tsara tarehy, toerana ao amin'ny komity mpanatanteraka.
Nahasarika mpifidy marobe ny valim-pifidianana ary hita fa vaky ilay didim-pitsarana, satria ny sasany tamin'ireo nandresy androany dia an'ny vondrona hafa resy ary nitady fanovana. Fotoana fohy taorian'ny fandresena dia nilaza i Mehra fa ny ekipany dia hiezaka ny handray ny mpikambana rehetra ao aminy, mba hahafahana mandray an-tanana ireo olana sy olana eo an-tanana.
Hojerena am-pahalianana ny fomba fandraisan'ny ekipa vaovao ny olany izay niteraka fahasosorana tamin'ireo mpandresy tamin'ny vondrona hafa notarihin'i Lally Mathews. Anisan'izany ny fanafoanana ny saram-pahafahan'ny mpikambana noho ny fotoanan'ny COVID sy ny fifandraisany amin'ny minisiteran'ny fizahantany.
IATO dia vondrona nasionalin'ny indostrian'ny fizahantany. Izy io dia manana mpikambana mihoatra ny 1,600 mandrakotra ny sehatra rehetra amin'ny indostrian'ny fizahantany. Niorina tamin'ny 1982, IATO androany dia manana fanekena sy fifandraisana iraisam-pirenena. Izy io dia manana fifandraisana akaiky sy fifandraisana tsy tapaka amin'ireo fikambananan'ny fizahan-tany hafa any Etazonia, Nepal, ary Indonezia, izay USTOA, NATO, ary ASITA no mpikambana ao aminy, ary mampitombo ny tambajotram-pifandraisana iraisam-pirenena miaraka amin'ireo vondrona matihanina ho amin'ny tsaratsara kokoa fanamorana ny mpandeha iraisam-pirenena mitsidika tsy an'i India ihany fa ny faritra iray manontolo.
Ny fikambanana dia mifandray akaiky amin'ny governemanta amin'ny olana lehibe rehetra manohina ny indostrian'ny fizahantany any India miaraka amin'ny laharam-pahamehana indrindra amin'ny fanamorana ny fizahan-tany. Izy io dia mifandray akaiky amin'ireo minisitera sy sampan-draharaham-panjakana rehetra, ny efitranon'ny varotra sy ny indostria, ny iraka diplaomatika ary ny hafa. IATO dia miasa ho mpanelanelana amin'ireo mpanapa-kevitra sy ny indostria ary manolotra ny fomba fijery feno amin'ny andaniny sy ny ankilany, synergizing ny fandaharam-potoanan'izy ireo amin'ny fanamorana ny fizahan-tany. Ny mpikambana IATO rehetra dia manaraka ny fenitra ambony indrindra amin'ny etika matihanina ary manolotra serivisy manokana ho an'ny mpanjifany.
Hihena ve ny zafikelintsika na endasina?
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana vaksiny manohitra ny COVID-19